Monday March 08, 2021 - 10:36:53 in Wararka by Super Admin
Caabuqa Caron Virus ayaa markale halaag daran ka geystay qaar kamid ah wadamada reergalbeedka oo ah kuwa ugu daran ee ladhiban caabuqan halista ah.
Faransiiska ayaa shalay sagootiyay boqolaal qof oo Carona uu halaajiyay, warbixin kasoo baxday wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa lagu sheegay in caabuqa Covid19 uu shalay soo ritay dad gaaraya 21,825 ruux isagoona dilay 130 ruux.
Tirada guud ee dadka uu Caroona ku dilay dalka faransiiska ayaa gaartay 88,574 ruux, faransiisku waa dalka sedaxaad ee ugu dhimashada badan qaaradda Yurub waxaana ka horreeya Ingiriiska iyo Talyaaniga.
dhinaca kale dalka Mareykanka ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay lagasoo diiwaan geliyay dhimashada kumanaan ruux, maraakizta caafimaadka waxay sheegeen in tirada bukaannada maalinlaha ah ay hoos udhacday balse tirada dhimashada ay sare ukacday, tirada guud ee dhimashada Carona ka dhalatay ee mareykanka ayaa ka gudubtay 525 kun oo ruux.
Madaxweynihii dalka Tanzaaniya oo si lama filaan ah udhintay.
Ku dhowaad 10 qof oo ku dhintay toogasho ka dhacday dalka Mareykanka.
Cali Mahadi oo cudurka Carona Virus ugu dhintay magaalada Nairobi.
Madaxweynaha Masar oo booqasho ay uga billaabatay dalka Suudaan.
Caabuqa Covid19 oo Kumanaan hor leh kun dilay dalka Mareykanka.